को सूक्ष्म वा खतरनाक ठाउँ हेर्न, मामिलामा को राज्य विश्लेषण गर्न को पङ्क्तिबद्ध मद्दत गर्छ स्थिति गर्न Tarot र संकल्प। यो तरिका को एक किसिम प्रदर्शन गर्न सक्छन्। विशेषज्ञहरु धेरै arcana प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं। एक शुरुवात तिनीहरूलाई बीच लिंक बुझ्न गाह्रो हुनेछ। एक supercharged नगण्य कारक अवस्था गर्न Tarot को पङ्क्तिबद्ध र संकल्प मात्र भ्रममा हुनेछ, मस्तिष्क मा स्पष्टीकरण योगदान गर्दैन। गरेको यस अवसरमा मालिक को सिफारिसहरू हेरौं।
स्थिति र प्राधिकरण मा Tarot फैलाउन: तयारी
कागज को पाना लिन र प्रश्न निर्दिष्ट गर्नुहोस्। यो लेख्न उचित छ। को पङ्क्तिबद्ध को विश्लेषण समय पहिचान कारक लिन्छ सोचाइ निर्देशन परिवर्तन हुनेछ, त्यसैले तपाईं हामी सुरु के समाधान गर्न आवश्यक छ। पछि, डेक चयन गर्नुहोस्। प्रदर्शन Tarot कार्ड स्थिति को Tarot रूपमा प्रमुख Arcana बित्तिकै, र जवानहरूसँग संयोजनमा। डेक कस्तो लिन, यो प्रश्न निर्भर र एक व्यक्ति को इच्छुकता छैन। परिणाम परिदृश्य संलग्न कार्ड संख्या निर्भर गर्दैन। त्यसपछि यो अवस्था र आवश्यकता संकल्प गर्न Tarot को पङ्क्तिबद्ध को जो विचार गर्न सिफारिस गरिएको छ। तिनीहरूले एक, तीन, पाँच कार्डहरू छन्। दुर्लभ अवस्थामा, डेक बढी arcana प्राप्त। तर मालिकको यसलाई छोड्नुहोस्। Tarot एक डेक कुनै प्रभाव र आन्दोलन को दिशा देखाउँछ भन्ने तथ्यलाई। तिनीहरूले धेरै हुन सक्दैन अवस्थामा छन्। उदाहरणका लागि प्रयोग गरेर द्वारा disassembled अवस्था बन्न भने, सेल्टिक पार वा पिरामिड अन्तमा भ्रमित (जस्तै यो decomposed)। यी संयोजन दशकसम्म कहिलेकाहीं, समय मा स्थिति को विकास देखाउँछ। तिनीहरूले शायद महत्त्वपूर्ण अवस्थामा, पढ्नुहोस्।
Tarot को पङ्क्तिबद्ध को nuances
Arcana एक डबल अर्थ राख्छ। यसलाई जब तार स्थिति गर्न Tarot कार्ड मा अनुमान छ बुझे र लगिनेछ गर्न खातामा छ। प्रत्येक फांसी दिन एक निश्चित स्थिति, तोकिएको पक्ष characterizing छ। जब तीन कार्ड मा परिदृश्य छ:
स्थिति किन खडा छ जो पछिल्लो।
वर्तमान र विकास को संभावनाहरु।
को संभावना नतिजा।
यदि थप कार्ड, को "तीन" स्थिति पाँचौ अनुच्छेद मा फेरबदल। पहिलो दुई अपरिवर्तित रहनेछ। र निम्नानुसार बाँकी हो:
3 - गोप्य प्रभाव।
4 - परिषद।
कार्ड पढ्दा, तपाईं प्रविष्ट र कब्जा स्थिति अर्थ हुनुपर्छ। अन्यथा, तपाईं यो ब्यालेन्स, भ्रमित वा गलत मूल्यांकन प्राप्त भन्छन् भन्ने महसुस छैन।
स्थिति र अनुमति (1 कार्ड) गर्न Tarot को संयोजन
यसको स्पष्ट सादगी तापनि यो पङ्क्तिबद्ध गाह्रो छ। एक lasso मा स्थिति को सम्पूर्ण बिन्दु निष्कर्षमा। यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने? स्थिति (प्रत्यक्ष र उल्टो), यो तहगत प्रणाली र कार्डको धेरै अर्थ हुन मूल्याङ्कन। यी थपिएको सही निष्कर्षमा बनाउन मद्दत गर्नेछ। प्रत्यक्ष Arcana आफ्नो अर्थ आशावाद लागि कारण छ हुँदा पनि छैन, सकारात्मक कुरा। विपरीत, घटनाहरु को विनाशकारी प्रवृत्ति विन्दुमा उल्टा। साना रहस्यमय एक फ्लाई बाहिर हात्ती फुल्नु छैन आग्रह गरे। वास्तवमा, महत्वपूर्ण केही हुन्छ। वरिष्ठ केही गम्भीर कदम र पालो portend। साथै, अवस्था नक्सा भविष्यको लागि हालको अवस्था र संभावनाहरु बारेमा थप भन्छन्। यो लगभग पाठ्यक्रम छैन रूपमा धनी lassos हात गूढ रहस्य जस्तै सुविधाजनक जो पछिल्लो बारेमा जानकारी बोक्न छैन। प्रश्न गाद को भाग्य को लागि यति महत्त्वपूर्ण छैन जब सामान्यतया, एक कार्ड लिन बाहिर।
को पङ्क्तिबद्ध गूढ रहस्य
शुरुआती लागि सबैभन्दा कठिन क्षण। नक्सा आफ्नो विवरण थाहा पर्याप्त छैन महसुस गर्नुपर्छ। यो तस्वीर हेर्न र पहिलो प्रभाव फसाउन सिफारिस गरिएको छ। यो, यो अवस्था बारे सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी वहन सम्झना। अर्को, वरिष्ठ संख्या र परिदृश्य मा माइनर Arcana गणना। पूर्व ठूलो छ भने - स्थिति महत्त्वपूर्ण छ, कम - शान्त, यो कुनै प्रभाव, छ भाग्य कुनै कुरा के तपाईं अहिले यो मुद्दा मा लाग्छ। उल्टा रहस्यमय (धेरै छन् भने) समस्या, राजद्रोहको, शत्रु प्रभाव portend। सबै गिर भने सीधा - परिपूर्ण! सूट संग पनि बुझ्नुपर्छ। तिनीहरूले निम्न रुझान संकेत:
Pentacles - पहिलो स्थानमा भौतिक चासो गर्नेछ।
कटोरे (कप) - भावना।
Wands - कार्य, संचार, कुनै पनि व्यवसाय।
तरवार - भावनात्मक काल परिस्थिति।
यी सबै कारक विश्लेषण पछि, तपाईं संयोजन decipher सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो अध्ययनको लागि, प्रत्येक अर्थमा को स्थिति संग लिङ्क, अलग रहस्यमय। त्यसपछि प्रत्येक अन्य तिनीहरूलाई जडान गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यो कार्ड अनुरूप वा द्वन्द्वमा छन् बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। यो पनि व्याख्या असर गर्छ। उदाहरणका लागि, तीन तरवार उल्टो अर्को महारानी गर्न को - आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा हार को एक चिन्ह। पहिलो कार्ड दोस्रो को प्रभाव mutes भनेर निराशावादी छ। आफ्नो प्रभाव अन्तर्गत व्यक्ति, ठाउँ नै फेला परेन, र उहाँले किन थाहा छैन सक्छ।
Tarot को मालिकको नै अवस्था मा रूपरेखा मा मुछिन छैन सुझाव दिन्छौं। मात्र एक फांसी दिन झिकेर गर्दा पनि, यो याद वा लेख्न राम्रो छ। को Tarot मा Guessing लामो भविष्यवाणीहरू दिन्छ। तपाईं परिणाम लागि प्रतीक्षा गर्न धैर्य आफूलाई पाउन भने तिनीहरूले सही हो। त्यसपछि अधीर व्यक्ति र सोच, यो मात्र होइन नै confuses, तर पनि भाग्य। नक्सा स्थिति मा एक प्रभाव छ। अधिक खुला छ, अधिक कठिन जादुई प्रभाव (विश्वास गर्न सक्दैन)। रातो झोला भण्डार - जब अनुमान - तपाईँ केही निष्क्रिय डेक सिफारिस गरिएको छ लागि, थाहा छ। त्यसैले मानिस आफ्नो आभा तिनीहरूलाई बन्द गर्छ। हरेक घण्टा सोच, तपाईं रहस्यमय विभिन्न निर्देशन र अवस्था असर कि शक्ती को कार्य द्वारा शह। रोगी हुन, आफ्नो सहायक (डेक) विश्वास गर्छु। शुभकामना छ!
6 तरवार Tarot: को अगाडी र उल्टो स्थिति कार्ड मूल्य
जो propionic एसिड जीवाणुहरु समावेश?
सुँगुर कसरी पोलिएको छ कि खानुहोस् क्रीम सॉसमा पकाइएको छ? बस हुँदैन!